Osi osikapa na akwụkwọ nri mgbụsị akwụkwọ na mushrooms | Bezzia
Ofe osikapa na akwụkwọ nri mgbụsị akwụkwọ na mushrooms
Maria onyekwere | 10/10/2021 10:00 | achịcha dị iche iche
N'ọtụtụ ụlọ, a na -akwadebe osikapa na ngwụsị izu. Ma mgbe ha na -arụ ọrụ, a na -etinyekwu obere nri osikapa iji mezue menu na Mọnde ma ọ bụ Tuesday. Na agbanyeghị na paella bụ eze nwanyị n'okwu ndị a, na Bezzia anyị nwere mmasị na -enwe ọ Ofe osikapa na akwụkwọ nri mgbụsị akwụkwọ na mushrooms dị ka nke anyị na -atụpụta taa.
Ọ na -amasị anyị ofe osikapa, n'agbanyeghị na ọ bụghị ofe nke na osikapa na -egwu mmiri n'ime ofe. Kedu ka ị si amasị ha? Jiri ego ofe gwuo egwu nke mere na osikapa na -amasị gị. Oge ole na ole mbụ ị nwere ike ịhazigharị ego na ijiji; mgbe e mesịrị, ị ga -enweta nha ahụ.
Tinyere osikapa, ero ha bụ ndị nkwalite uzommebe a. Dabere na nke ị na -eji, ị nwere ike chọọ sie ha ntakịrị tupu ịtinye ha na osikapa. Anyị na -eji ụdị ndị siri ike eme nke a, n'agbanyeghị na oge osikapa zuru oke iji sie ha.
4 tablespoons nke extra Virgin olive mmanụ
1 nnukwu yabasị ọcha, minced
2 akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Italiantali, nke a kụrụ
2 garlic na-egbu osisi, gbue
450g. ụbịa ero
260 g. osikapa
2 tablespoons tomato ihendori
1/2 teaspoon nke paprika dị ụtọ
Ole na ole broccoli florets, esie ya
Akwụkwọ nri ofe
Agba nri (nhọrọ)
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime mushrooms ị ga -eji sie ike, gbanye ya maka nkeji ole na ole n'ime pan dị iche iji mee ka ọ dị nro.
Mgbe nke ahụ gasị, n'ime nnukwu efere, kpoo mmanụ olive anọ na ngaji zuo yabasị na ose n'oge nkeji iri abụọ.
Emechaa webata ero na galik gbachapụrụ agbachasị ma ghee ruo mgbe ndị nke mbụ chachachara achacha.
Mgbe ah tinye osikapa na sauté nkeji ole na ole tupu ịgbakwunye nke mbụ, tomato e ghere eghe na nke abụọ, ngwa nri.
Ozugbo wụsa efere, Agba nri na broccoli esiri esi nri. Ọnụ mmiri ga -adabere na osikapa, ọkụ ... mana ọ ga -abụ ihe dịka okpukpu anọ nke osikapa.
Ngwakọta, kpuchie nsị na esi nri dị ọkụ maka nkeji isii.
Mgbe ahụ, kpughee, wepụ na sie nri dị nro nkeji iri na abụọ ọzọ na -akpali osikapa site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ị hụ na ọ na -akpọnwụ, naanị ị ga -agbakwunye ofe ma ọ bụ mmiri.
Mgbe osikapa dị nro, wepụ ite ahụ n'ọkụ, kpuchie ya na akwa na ka osikapa na akwụkwọ nri na mushrooms guzoro nkeji ole na ole tupu ị na-eje ozi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ntụziaka » achịcha dị iche iche » Ofe osikapa na akwụkwọ nri mgbụsị akwụkwọ na mushrooms
Etu ị ga -esi mee anya gị ma ọ bụrụ na ị nwere nku anya na -adịghị mma